के तपाईलाई बाइकमा हुँदा कुकुरहरुले लखेटेका छन् ? छन् भने यहाँ हेर्नुहोस् आखिर किन लखेट्छन् – Medianp
काठमाडौको सडकमा फोहोर उठाउने तथा बाइकमा सवार यात्रीलाइ कुकुरहरुले लखेटेको देख्नुभएको छ ? के छ त कारण पढनुस यो रोचक तथ्य
काठमाडौ ।कुकुरको प्रयोगले चन्द्रमा देखि पृथ्बीसम्म निकै ठुलो चर्चा फिजाएको छ । के हुन्छ त कुकुरमा त्यस्तो क्षमता तपाइलाइ थाहा छ ?काठमाडौको गल्लीगल्लीमा पनि देख्नुभएको होला फोहोर उठाउने मान्छेलाइ तथा बाइकमा सवार गर्ने यात्रीलाइ कुकुरले लखेट्ने गर्छ । साथै कुकुरले किन पत्तो लगाउछ त ,सनसनीपूर्ण घटनाहरु ?किनभने कुकुरमा यस्ता क्षमताहरु हुन्छन ।
कुकुरको सुग्ने क्षमता एकदम धेरै हुन्छ । त्यस्तै कुकुरहरुले आफ्नो एक निश्चित स्थानमा मात्र पिसाब गर्ने गर्छन र उनीहरु आफ्नो त्यो ठाउँ सुघेर पत्ता लगाउछन् । त्यसपछि त्यस स्थानमा आउने सवारी वा मान्छेहरुलै उनीहरु लखेट्ने गर्छन ।
त्यसैगरी याद गर्नुभएको होला बाटोमा चल्ने साना अथवा ठुला सवारी साधन कुनै ठाउँमा रोकेर राखेको समयमा कुकुरले पिसाब फेरिरहेको देख्नुहुन्छ । जब तपाई त्यो सवारी चलाएर अन्य स्थान जानुहुन्छ भने त्यस सवारीमा कुनै अर्को कुकुर छ र यो मेरो क्षेत्रमा बस्न सक्ला भन्ने सोचले त्यस क्षेत्रका कुकुरहरुले सवारीलाई पछाडीबाट लखेट्ने गर्छन ।
बैवाहिक जीवनलाई खुसी राख्न अपनाउनुहोस् यी उपाय ! जसले जीवनभरी मिल्नेछ खुसी !
छोरीको कोठामा राती फेला परे युवक, परिवार मिलेर काटिदिए एक अंग
यसरी बनाउनुहोस् श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धलाई रोमान्चक !